AMATHIPHU APHEZULU AYI-10 OKUSHESHISA ISIPHEQULULI SE-CHROME KUZE KUBE IZIKHATHI EZI-5 NGOKUSHESHA - 2021 - I-WINDOWS 10
Amathiphu aphezulu ayi-10 okusheshisa isiphequluli se-Chrome kuze kube izikhathi ezi-5 ngokushesha - 2021
Ngabe ulwe kanzima no Ukusebenza okuhamba kancane kwe-google Chrome ngemuva kokuvuselelwa kwamawindows 10? Ingabe i-Google Chrome yakho izizwa ihamba kancane kancane kunakuqala? Noma uthola ukuthi isiphequluli se-Chrome sisebenzisa i-CPU ephezulu noma i-RAM yesistimu yakho futhi senza i-PC yakho izizwe ihamba kancane kunalokho okufanele? Ifuna izindlela zokwenza yenza iGoogle Chrome isheshe futhi, futhi ukunciphisa inani le-RAM, i-CPU isiphequluli siyidla. Lapha amanye amaqhinga asetshenziswayo ukuze shesha isiphequluli se-chrome kufika izikhathi ezi-5 ngokushesha.
Okuqukethwe umbukiso 1 Ungayenza kanjani iGoogle Chrome isheshe kumawindows 10 1.1 Buyekeza isiphequluli se-Chrome 1.2 Susa izandiso ezingafuneki 1.3 Nika amandla i-preetch 1.4 Qiniseka ukuthi insiza yokubikezela inikwe amandla 1.5 Vala amathebhu ngokushesha usebenzisa isici sokuhlola 1.6 Khulisa i-RAM ye-Chrome usebenzisa isici sokuhlola 1.7 Faka i-Data Saver Extension 1.8 Qalisa isiphequluli se-Chrome esinetimu ezenzakalelayo 1.9 Sula idatha yenqolobane 1.10 Qalisa Ithuluzi Lokuhlanza i-Chrome 1.11 Buyela kuzilungiselelo ezizenzakalelayo zesiphequluli
Ungayenza kanjani iGoogle Chrome isheshe kumawindows 10
I-Google chrome iyisiphequluli sewebhu esisheshayo nesisetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele Ngenxa yejubane, ukungaguquguquki kanye nokusebenziseka kwayo okulula okusetshenziswa umsebenzisi. Kepha Ngemuva kokusetshenziswa kwamasonto ambalwa, isiphequluli sithatha imizuzwana embalwa ukwethula, futhi ijubane lilonke liyehla. Kunezizathu eziningi (njenge-cache, i-junk, umlando wesiphequluli, izandiso ezibangela izingqinamba njll) ezenza i-Google Chrome ihambe kancane ngokuqhathaniswa. Nakhu ukuthi ungakwandisa kanjani ukusebenza kwe-Google Chrome futhi wenze i-google chrome isebenze ngokushesha kuma-windows 10.
Buyekeza isiphequluli se-Chrome
Le yinto yokuqala okufanele uyenze, ukwengeza futhi shesha isiphequluli se-chrome ukusebenza. Ngokuyinhloko, i-Google Chrome izibuyekeza ngokwayo inguqulo yakamuva. Kepha kwesinye isikhathi ngenxa yezizathu ezimbalwa zobuchwepheshe nokuxhuma okungalungile, bekungeke kukwazi ukuzibuyekeza. Ukuhlola nokuvuselela uhlobo lwesiphequluli se-chrome chrome: // usizo kwibha yekheli bese ulandela okwenziwe.
isici sokuvuselelwa windows 10 inguqulo 1903 inamathele kuma-99
Susa izandiso ezingafuneki
Le yinto yesibili okufanele uyihlole. Uma ufake izandiso eziningi ze-chrome lokhu kungadala ukubambezela isiphequluli sakho sewebhu noma kudle izinsiza zohlelo ezingadingekile. Ukuhlola nokususa Uhlobo lwezandiso ezingadingekile chrome: // izandiso kwibha yekheli bese ukhubaza noma yiziphi izandiso ezingafuneki. Khubaza isandiso noma chofoza ku-susa ukuze ususe.
Nika amandla i-preetch
Kuyindaba ebaluleke kakhulu ukuvula izibikezelo zezenzo zenethiwekhi ezibizwa nje ngokuthi yi-prefetch ezenza iGoogle Chrome ivule ikhasi lewebhu ngokushesha ngokuqhathaniswa nezinye iziphequluli.
Ukuhlola nokunika amandla i-google chrome evulekile preetch Iya phezulu ekhoneni lesokudla bese uqhafaza kusithonjana se-Hamburger esinamachashazi amathathu bese uya kuzilungiselelo. noma Uhlobo chrome: // izilungiselelo / kubha yekheli ukuvula izilungiselelo. Manje iya ezansi kwekhasi bese uchofoza ku-Khombisa inketho yezilungiselelo ezithuthukile. Okulandelayo, kunketho yobumfihlo qiniseka ukuthi umaka ibhokisi eliseduze kwe- “ Sebenzisa insiza yokubikezela ukulayisha amakhasi ngokushesha okukhulu . ” Manje qala kabusha isiphequluli sakho samanje se-Google Chrome ukuze uthole isiphequluli sewebhu esisheshayo.
system_service_exception windows 8.1
Qiniseka ukuthi insiza yokubikezela inikwe amandla
I-Google Chrome isebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zeWebhu izinsizakalo futhi izinsizakalo zokubikezela ukuthuthukisa isipiliyoni sakho sokuphequlula. Lokhu kusuka ekuphakamiseni enye iwebhusayithi lapho leyo ozama ukuyibuka ingatholakali kuyo ukubikezela izenzo zenethiwekhi ngaphambi kwesikhathi ukuze kusheshiswe izikhathi zokulayisha ikhasi.
Futhi kusuka ku-Google Chrome> Izilungiselelo> Khombisa izilungiselelo ezithuthukile. Manje ngaphansi kwesigaba Sobumfihlo, khetha i- Sebenzisa insiza yokubikezela ukulayisha amakhasi ngokushesha okukhulu ukubeka.
Vala amathebhu ngokushesha usebenzisa isici sokuhlola
Ukufinyelela lokhu kulungiselelwa okuyimfihlo, thayipha chrome: // amafulegi kwibha yakho yekheli, sesha “ Vala ithebhu / iwindi ngokushesha ”Bese uchofoza inkinobho ethi“ Vumela ”ngezansi ukuvula lesi sici.
amawindi awakwazi ukuxhuma kuphrinta 0x0000007e
Khulisa i-RAM ye-Chrome usebenzisa isici sokuhlola
Kufanele ukhuphule i-RAM i-Chrome evunyelwe ukuyisebenzisa. Ngokulungisa inani lalo, ungalungisa ukuphakama kwethayela nobubanzi ukuze unikeze i-RAM eningi kulo. Lokhu kuzonikeza ukuskrola okungcono kanye nokungingiza okuncane ngenkathi usebenzisa isiphequluli.
Ukulungisa ukulungiselelwa, thayipha “Ithayili lokuzenzakalelayo” kufayela le- Thola dialog futhi kokubili, Ububanzi bethayela nokuzenzakalelayo izinketho kufanele zivele esikrinini sakho sekhompyutha. Sebenzisa amamenyu okudonsela phansi ukushintsha amanani asuka kokuthi “Okuzenzakalelayo” aye ku- 512 .
Faka i-Data Saver Extension
Uma inkinga yakho ihlobene kakhulu noxhumano lwe-inthanethi olungeluhle kunalolo oluxubene nesiphequluli, ke enye indlela ongasiza ngayo ukuthuthukisa umkhawulokudonsa ukufaka isandiso se-Google Data Saver. Lesi sandiso sisebenzisa amaseva we-Google ukucindezela nokwandisa amakhasi e-web ngaphambi kokuthi alethwe kwisiphequluli sakho.
Qalisa isiphequluli se-Chrome esinetimu ezenzakalelayo
Uma wenze ngokwezifiso i-google chrome lapho sincoma ukuyibuyisela kokuzenzakalelayo, Ngoba izingqikithi zidla i-RAM, ngakho-ke uma ufuna isiphequluli esisheshayo, sebenzisa ingqikithi ezenzakalelayo. Ukubuyisa Uhlobo lwetimu ye-Chrome chrome: // izilungiselelo kubha yekheli nangaphansi Ukubukeka , uma ngabe Setha kabusha kutimu ezenzakalelayo inkinobho ayenziwa mpunga bese usebenzisa itimu yangokwezifiso. Chofoza inkinobho ukubuyela kokuzenzakalelayo.
Sula idatha yenqolobane
Olunye udaba olubalulekile oludala isikhala esiphansi kwi-hard drive futhi ukuwasula njalo ungathola ukuthi i-Google Chrome izoshesha ngokuzenzekelayo.
ungamisa kanjani windows 10 isibuyekezo sasekhaya
Thayipha chrome: // izilungiselelo / clearBrowserData kubha yekheli futhi ngiphakamisa ukukhetha kuphela Izithombe ezifakwe kunqolobane namafayela inketho. Ngenye indlela, ungathatha yonke into bese uqala ngesilayidi esihlanzekile. Futhi Ngemiphumela emihle izinto ezicacile kusukela ekuqaleni kwesikhathi .
Qalisa Ithuluzi Lokuhlanza i-Chrome
Abasebenzisi beWindows bangasebenzisa Ithuluzi Lokususa Isoftware yakwa-Google . Leli Ithuluzi elikhulu lesiphequluli se-chrome elisiza ukuthola isoftware eyingozi kukhompyutha yakho bese ulisusa.
Buyela kuzilungiselelo ezizenzakalelayo zesiphequluli
Uma yonke le ndlela engenhla yehluleka ukusheshisa isiphequluli se-Chrome ke isikhathi sayo sokubuyela kuzilungiselelo zesiphequluli esizenzakalelayo. esetha kabusha izilungiselelo zesiphequluli se-chrome ukusetha okuzenzakalelayo nokulungisa uma ngabe kukhona okwenziwe ngokwezifiso okubangelwa isiphequluli se-chrome ukwehlisa ijubane.
Qalisa i-Chrome, bese uya kumenyu ethi Ngaphezulu ngakwesokudla ebukeka njengamachashazi amathathu avundlile. Ngemuva kokuchofoza kuyo, khetha Izilungiselelo, bese uthuthukile. Lapho, uzobona isigaba sokusetha kabusha esinenkinobho enegama elifanayo. Chofoza ukuze uqinisekise ukuthi ufuna ukubuyela kuzilungiselelo ezizenzakalelayo.
Lezi ngezinye zezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza yenza i-google chrome ngokushesha ku-Windows 10, 8.1 no-7. Ngabe lawa macebiso asize ukwenza kahle kusipiliyoni sesiphequluli sakho sewebhu? usazise kumazwana angezansi.
Lungisa ukusetshenziswa okuphezulu kwe-Google chrome ku-windows 10 / 8.1 / 7
Inkinga yephutha le-Err_Connection_Timed_Out ku-Google Chrome
Kuxazululwe: Iphutha le- 'Uxhumano lwakho Aluyona Imfihlo' ku-Google Chrome
Ungakulungisa kanjani ukusetshenziswa kwe-100% Disk ku Windows 10
Ungayilungisa kanjani i-Google chrome iyekile ukusebenza windows 10, 8.1 no-7
ungayiguqula kanjani i-usb ibe yinqama
iphutha_connection_timed_out windows 7
ukufaka windows 10 99%
ungasetha kanjani kabusha isiphequluli esinqenqemeni ukuthi sizenzakalelayo
uyifaka kanjani ikhompyutha yami kumawindows 10 desktop
discord ukuthatha unaphakade ukuvuselela
windows 10 itunes ayiphenduli